Samsung na-ebupụta Galaxy On5 Pro na On7 Pro na India | Gam akporosis
Agbanyeghi na anyi anabataghi ogwe ngwaọrụ nke Samsung bidoro ihe dika afọ ato gara aga ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kwa ụbọchịEziokwu bụ na ọ ka na-achọ usoro ọhụrụ iji gbochie ọdụ ndị ahụ si China na mba ndị ọzọ nwere ike ịmegharị ahịa ahụ ka ha nwee ike ịgha ya ma were ya gaa n'ikpere mmiri ya. Anyị nwere ike ịsị na Samsung abụwo otu n'ime ndị ukwu nke nwere ike ihu igwe oké ifufe ahụ na ndị na-azọpụta ya bụ usoro dị iche iche ọ malitere.
Otu n'ime ha bụ On usoro nke na-abịa ugbu a na ngwaọrụ ọhụrụ abụọ, Samsung Galaxy On5 Pro na Galaxy On7 Pro, usoro nke mbu na On5 na On7. Newdị ọhụrụ ndị ahụ na-enye obere mgbanwe na ngwaike ọ bụ ezie na ọ na-agbakwunye ogo karịa site na ịnye gam akporo 6.0 Marshmallow. Ebumnuche abụọ ewepụtara na India, n'ihi mkpa ahịa a nwere nke Xiaomi n'onwe ya nwere dị ka nke kachasị mkpa taa, dịka anyị mụtara ụnyaahụ mgbe ị na-akpọsa ọnụ ọgụgụ buru ibu nke smartphones Redmi rere n'ime afọ 3.
1 Obere mmelite, mana ya na Marshmallow
1.1 Samsung Galaxy On5 Pro nkọwa
1.2 Samsung Galaxy On7 Pro nkọwa
Obere mmelite, mana ya na Marshmallow
Galaxy On5 Pro nwere ihuenyo 5-anụ ọhịa HD ma nwee obi ike ya quad-isi Exynos 3475 mgbawa clocked na 1.3 GHz na nwere 8 MP n'azụ igwefoto. Kama nke ahụ, Galaxy On7 Pro nwere ihuenyo 5,5 nke anụ ọhịa HD, nwere snapdragon 410 quad-core processor clocked na 1.2 GHz ma nwee 13 megapixels na azụ.
Ma smartphones nwere igwefoto n'ihu 5 megapixel, ha na-arụ ọrụ na ngwanrọ ahụ n'ihi Android 6.0 Marshmallow, ha nwere 2 GB nke Ram ma ha nwere 16 GB nke nchekwa dị n'ime. gbasaa site na kaadi micro SD. Ọ na-enye nkwado maka njikọta 4G LTE na nkwado maka VoLTE ma nwekwaa nkwado abụọ. Uzo ozo bu na ha nwere Ultra Ultra Saving mode ekele Opera Max nke na enye ndi oru ohere izoputa ihe ruru 50% na njiri data na onodu S.
Samsung Galaxy On5 Pro nkọwa
5-anụ ọhịa (1280 x 720) HD ngosi
Quad-isi Exynos 3475 mgbawa clocked na 1.3 GHz
16 GB nke nchekwa dị n'ime nwere ike ịgbasa ruo 128 GB na kaadi micro SD
8 MP n'azụ igwefoto na ikanam flash, f / 2.2 oghere, 1080p ndekọ vidiyo
Igwefoto n'ihu 5MP, oghere f / 2.2
Akụkụ: 142,3 x 72,1 x 8,5 mm
4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.1, GPS / GLONASS
Samsung Galaxy On7 Pro nkọwa
5,5-anụ ọhịa (1280 x 720) HD ngosi
Quad-core Snapdragon 410 (MSM8916) mgbawa kụrụ na 1.2 GHz
16 GB nke ebe nchekwa dị n'ime ahụ gbasaa site na micro SD ruo 128GB
13 MP n'azụ igwefoto na ikanam flash, f / 2.1 oghere, 1080p ndekọ vidiyo
5 MP n'ihu igwefoto, f / 2.2 oghere
Akụkụ: 151,8 x 77,5 x 8,2 mm
4G LTE / 3G HSPA +, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.1, GPS, GLONASS
Anyị na-ekwu maka njedebe abụọ nke ahụ ha na-agafe obere dollar 150 ya mere anyị nwere ike ịghọta na ngwakọta nke ihe ndị a na-etinye anyị n'ihu ezigbo ngwaike. O doro anya na ọ bụrụ na ha nwere mkpebi ihuenyo ka mma, naanị nkwarụ m hụrụ na ọdụ abụọ ahụ, ọ ga-etinye ha dị ka ezigbo nzụta, ọ bụghị naanị maka akụrụngwa ha, kama maka ịbụ akara Samsung na nkwado nke a pụtara mgbe anyị nwetara ya ebe a na mba anyị. Enwere ngwaọrụ mkpanaka ka mma, mana ọtụtụ ga-abịa site na mbubata, isi okwu nke na-eweghachi ọtụtụ ndị ọrụ azụ.
Samsung edepụtara Galaxy On5 Pro na Amazon maka ọrịre maka $ 137 ma ihe nlereanya na oji na ọla edo. Galaxy On7 Pro dịkwa site na Amazon na otu agba abụọ ahụ na ọnụahịa mgbanwe nke $ 167.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Samsung weputara Galaxy On5 Pro na Galaxy On7 Pro
Samsung ga-elekwasị anya na ngalaba teknụzụ ọhụụ atọ